Kedu otu ngwa nyocha nke Amazon nwere ike isi metụta njikarịcha ndepụta nke ngwaahịa gị?
Ndị ahịa niile na-ere ahịa n'Ịntanet na-achọpụta na ihe bara uru nwere ike ịdakwasị ngwaahịa gị na Amazon zuru ụwa ọnụ.Amazon na-enye abamuru maka ma ndị na-ere ahịa na ndị ere ere. Ọ bụ ya mere na ọ bụ oge na-adịghị anya iji chee ngwaahịa gị na Amazon ma ị nwere ebe ị nwere ma ọ bụ na ị nwere.
Iji mee ka ngwaahịa gị hụ na ịchọrọ Amazon ị ga-achọ ịmepụta mgbasa ozi ahịa. Ekwesiri ighota na Amazon A9 ogo algorithm di iche na ihe anyi huru na Google. Amazon na-ekwu okwu banyere mmụba ego na ụba na ngwaahịa ndị e mechara - web design companies in the bay area. Ọ pụtara na onye ọ bụla na-ere ahịa Amazon nwere ohere ịbawanye ego ọ na-enweta na ahịa ma na-adọta ọtụtụ ndị ọzọ karịa na ebe nrụọrụ weebụ a ma ama. Otú ọ dị, n'ife ahịa e-azụmahịa ahụ asọmpi, ọ gaghị ezuru iji debe ngwaahịa gị ma chere maka ahịa, ọ bụrụgodị na a maara mma gị.Ya mere, iji hụ na ngwaahịa gị ga-ahụ maka ndị na-ege gị ntị, ịkwesịrị itinye oge gị na mgbalị gị na nyocha ọchụchọ, yana nchịkọta ndepụta. Ọzọkwa, ọ bụ ihe amamihe dị na iji otu ngwaahịa Amazon (Amazon Vendor Central, Amazon Seller Central, Amazon na-ere Central Express) nke ga-zuru oke na-egbo mkpa azụmahịa gị.
Dịka Onyeahịa Amazon, ị nwere ọtụtụ ihe ịme gụnyere nchọpụta, nsuso, na ọrụ nlekọta. Ọ bụrụ na ị nwere ọtụtụ ngwaahịa na gị, ọ ga-abụ nnọọ ihe ịma aka iji jikwaa aka ha niile. Ị chọrọ ngwanrọ ọkachamara ngwanrọ iji nyere gị aka inwe ọganihu.
N'isiokwu a, m ga-eji ụfọdụ ọkachamara nyocha na ngwaọrụ nyocha nke ga - enyere gị aka ịkwalite ọnọdụ gị na Amazon ma dọtakwuo ndị ndu.
Ngwaọrụ TOP nke nwere ike ime ka ego gị karịa na Amazon
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịchọta ezi ozi banyere ngwaahịa na niche akwụkwọ na-ewu ewu na Amazon, Jungle Scout ga-akacha mma maka gị. Ngwa nyocha a na-enyere aka ịchọta ngwaahịa Amazon ị nwere ike irite na ya. Jungle Scout na-anakọta data ahịa Amazon kachasị ịtụnanya na ụlọ ọrụ ahụ iji nyere gị aka izere ịme ihe ọ bụla dị oké ọnụ ahịa. Ngwaọrụ a na-agụnye ihe nchọgharị ngwaahịa nke ezubere iji chekwaa oge ị nwere ike itinye na nyocha dị egwu. E wezụga nke ahụ, ị ​​nwere ike iji ngwá ọrụ a nyochaa ndị nyocha gị niche. N'ikpeazụ, akụkụ kachasị mma nke ya bụ na ị nwere ike ịchọta niche gị na-akpaghị aka iji kpuchie ọwa mmiri na-enweta ego. Ọ bụrụ na iji Jungle Scout dị ka nchịkọta Chrome, ị nwere ike ịnweta nghọta ngwa ngwa na ibe ọ bụla ị na-agagharị. A ga-enye gị ụgwọ ahịa ọ bụla, atụmatụ ahịa, nyochaa ọnụ ọgụgụ na ọbụna karịa. Ọ ga - enyere gị aka ịmepụta ihe ziri ezi na - atụle ada.
Ya mere, Jungle Scout nwere ike inyere gị aka ịnọ na TOP nke ahịa ahịa Amazon na asọmpi ma wepụ ndị asọmpi gị niche.
Ọtụtụ ndị ahịa na-eji Google chọọ ịchọta Amazon ngwaahịa. Nke mbụ, ha tinye aha aha tinyere Amazon na igbe nchọta Google, ma naanị mgbe ahụ na-apụta na peeji nke rịzọlt rịzọlt Amazon. Seeti Amazon SEO na-enye aka ịwelite ohere nke ngwaahịa Amazon gị na-egosipụta na TOP nke Google SERP. Site na nkà na ụzụ pụrụ iche nke nnukwu ụlọ njikọ, Semalt na-eme ka Google jikọọ ngwaahịa ngwaahịa gị na mkpirisi igodo ndị ị chọrọ ịkwado ụlọ ahịa gị na nsonaazụ TOP. Ịnwere ike ịnye ndenye aha ọnwa isii ma ọ bụ afọ nke ga-agụnye ọrụ ndị dịka ọkachamara isiokwu isiokwu, nhazi mgbasa ozi dị irè, ruo 100 nchịkọta ọchụchọ na Google TOP10, ịdị mma ọkwa, nwere njehie SEO nyocha na mgbazi. Ihe kachasị mma bụ na ị ga-enwe ike inweta nkwado ọkachamara mgbe niile site na ndị ọkachamara na Semalt.
Ya mere, ọ bụrụ na ịchọrọ ịpụpụ ndị asọmpi gị ma mee ka ndị ahịa nwere ike ịnweta njedebe kasị ukwuu nke okporo ụzọ na Internet, Semalt Amazon SEO ga-egbo mkpa gị niile.
Nchịkọta okwu bụ akụkụ dị mkpa nke mgbasa ozi kachasị mma, gụnyere ndepụta ngwaahịa Amazon njikarịcha. Ọ bụ mbụ Amazon isiokwu tracker, n'ihi ya, ọ bụ eleghị anya ọzọ tozuru okè karịa otú nke asọmpi isiokwu tracking ngwaọrụ. Ngwá ọrụ a na - enyere aka na - eto eto ma na - ebuli ha ogologo oge. Dị ka atụmatụ AMZ Tracker si emejọ, ị nwere ike ibute mgbasa ozi mbụ na-ebute ụzọ na mbụ, ọnụọgụgụ ọnụego, na onye na-asọ asọmpi. Ọ na-enye gị data gbasara ngwaahịa gị n'ọnọdụ dị iche iche ma na-egwu ngwaahịa onye ọkaibe gị ka i wee hụ mgbe ha na-eme mgbanwe na-arụ ọrụ. Ọzọkwa, AMZ Tracker kwadoro ọnụahịa kasịnụ nke Amazon n'elu Vipon. com nke na-enye ndị ahịa ohere ileta ọtụtụ nde ndị ahịa. Otu uru ọzọ bụ na AMZ Tracker na-enye aka iji bulie ndepụta ngwaahịa gị. AMZ Tracker On Analyzer Page na-egosi isi ihe siri ike ma na-adịghị ike nke ndepụta ndepụta ngwaahịa gị ugbu a, na-enye gị ohere iji dozie. Ọzọkwa, Amazon na-enye ohere iji soro nyocha ndị na-adịghị mma ma hazie akụkọ email.
Ngwaọrụ a na-egosi gị okwu ọchụchọ kachasị mkpa ndị ahịa gị nwere ike iji ịchọta ngwaahịa gị ma ọ bụ ihe ndị metụtara ya n'ime otu niche ahụ. Ihe nchekwa data ya gụnyere ihe karịrị ndeokwu nde 170. Ngwaọrụ a bụ ihe zuru oke maka ndị ahịa na-achọ ịbawanye ahịa nke ngwaahịa ha na Amazon. Okwu ndị ahịa ahịa na-enyere aka ikpughe oke okwu okwu nke ndị ahịa na-eji achọ ngwaahịa. Ọ dị mfe nhazi site na okwu ndị a dịka ha anaghị asọ asọmpi. Ọzọkwa, n'iji ngwá ọrụ a, ị nwere ike nweta ntinye okwu si ahịa n'ụwa nile. Okwu ndị ahịa ahịa na-enye gị ohere ịnweta ndị na-ege ntị n'ụwa niile na nchekwa data nke ndị ahịa si mba dị iche iche na Europe na Asia. Site na ngwa ahia ahia ị nwere ike ịme ihe CSV kachasị iji jikọta data a na usoro ọ bụla i ji rụọ ọrụ nke ọma. N'ikpeazụ, ị na-eji ngwá ọrụ a eme ihe ị ga-enwe ike inweta nkwado ndị ọkachamara.
Ngwaọrụ Ngwá Ọrụ
Akụrụngwa Ngwá Ọrụ bụ ọrụ nyocha ọkachamara nke Amazon nke na-enyere ndị ahịa aka n'ịntanetị aka. wepụta usoro ọchụchọ ogologo-ọdụ dị mkpa site na iji search engine search engine. Ngwá ọrụ a na-eji ọrụ Amazon mee ihe iji nyefee ọtụtụ narị puku ndị na-achọ ogologo oge ọdụ ọchụchọ maka ndepụta njirimara Amazon. Ndị na-ere ahịa Amazon ga-achọ ịnweta ihe ndị ọzọ dị elu ga-erite uru site na Nhọrọ Tool Pro maka Amazon nhọrọ. Otú ọ dị, ihe ndị dị ka nlekota nchịkọta kachasị dị elu na-anọgide na-erughị maka ndị ọrụ nke Amazon Tool Tool.